युगसम्बाद साप्ताहिक - वैज्ञानिकहरुले भेउ नपाएको एउटा सम्भावना - यादब देवकोटा
Saturday, 05.30.2020, 02:42pm (GMT+5.5) Home Contact
Wednesday, 02.12.2020, 12:23pm (GMT+5.5)
माघ २६ गते आइतबार मात्र एक महिने ‘माघस्नान’ तथा ‘स्वस्थानी व्रतकथा’ समाप्त भएको छ । वैदिक सनातनी हिन्दु धर्म–संस्कृतिमा एक महिनासम्म श्री स्वस्थानी व्रतकथा वाचनन गर्ने चयन छ र प्रायःजसोले घरघरमा कथा वाचन र श्रवण गरे । स्वस्थानी व्रतकथामा केही आश्चर्यलाग्दा र आधुनिक विज्ञानले भरखरै सुरुवात गरेको केही महत्वपूर्ण पक्षहरु उजागर भएको छ । त्यसमध्येमा आधुनिक विज्ञानको ध्यान तान्ने पक्ष हो) मानव शिर प्रत्यारोपण ।
त्यस्तै अहिलेको ‘टेष्ट टुयूब बेबी’ को मान्यता महाभारतकालमै भएको हो । किनभने पूर्वीय संसार विशेष गरी सनातनी धर्मावलम्बीहरुले मैथुनी र अमैथुनी क्रियाबाट सृष्टि भएको मान्यतामा विश्वास राख्छ । जुन आज प्रमाणित भएर पश्चिमी संसारले नै अमैथुनी क्रियाबाट सृष्टि गर्न थालेको छ । अर्थात् महिला र पुरुषको सहवासविना सन्तान जन्माउन थालेको छ । यो क्रम नेपालमा पनि सुरु भएको छ । यो विज्ञानको चमत्कार भनिन्छ । तर यसको आधार हजारौं वर्षअघि नै तयार थियो । कौरब र पाण्डवका पिताहरु अमैथुनी क्रियाबाट जन्मेका थिए । आजभोलि ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ भनेजस्तै ।
उपरोक्त सन्दर्भले के सिद्ध गर्छ भने हामी पूर्वीय दर्शनका अभ्यस्तकर्ताहरु पश्चिमाले घोकाइदिएको पाठ पढेर आफ्नोपन भुल्दै गएका छौं । आज संसारमा जेजति आविस्कार भएका छन, जेजति प्रविधिको विकास भएका छन्, हातहतियारदेखि वायुयानसम्म ती सबैका कल्पना वेदका विभिन्न हाँगाका शास्त्रहरुले सविस्तार वर्णन गरेको छ । चाहे विमानको कुरा होस् या आम विनाकारी आणविक हतियार । यी सबै उतिबेलै अस्तित्वमा थिए । यी सबै कुराहरु लिपिबद्ध भएको शास्त्र हामीले पूजा गरेर राख्यौं, त्यही शास्त्र पश्चिमाहरुले अध्ययन गरेर व्यवहारमा लागू गरे । फरक यत्ति हो ।
आज मृत्युको मुखमा पुगेका मानिसमा अंग प्रत्यारोपण गरेर जीवन प्रदान गरिन्छ । यो विज्ञानको चमत्कार भनिन्छ तर वास्तवमा यो विज्ञानको चमत्कार नभएर वेदको चमत्कार हो । लाखौं वर्षअघि नै पूर्वीय समाजमा अंग प्रत्यारोपण भएको थियो र विश्वमा अंग प्रत्यारोपण गर्ने पहिलो पात्र देवादिदेव महादेव हुन् ।
माथी नै उल्लेख गरियो कि– श्री स्वस्थानी व्रतकथा अनुसार आफ्नी अर्धाङ्गीनि सतिदेवीले दक्षप्रजापतिको यज्ञकुण्डमा हामफालेर देह त्याग गरेपछि विक्षिप्त बनेका महादेवले आफ्ना सेना पठाएर दक्षको यज्ञ विध्वंश गरिदिए । दक्षको शिर काटेर यज्ञकुण्डमा होमिदिए । पछि उनै महादेवले दक्षकी पत्नीको अनुनय सुनेर बोकाको शिर दक्षको शरीरमा जोडिदिए । यो सन्दर्भ लेखियो कति हजार वर्ष पहिले यक्किन भन्न सकिन्न । तर अंग प्रत्यारोपण मात्र हैन परिवर्तन नै गर्न सकिन्छ भनेर लेखियो । आज मानव अंग प्रत्यारोपण सहजै गर्न सकिन्छ ।
वेद धर्मशास्त्र नभएर विज्ञान हो भनेर विद्वानहरुले त्यसै भनेका हैनन् । एउटै वेदका विविध हाँगाहरुमा सृष्टि संरचनालाई सुसंचालित गरिराख्ने अनेक विधि लिपिबद्ध भएको छ । त्यस्तैमा प¥यो मानवअंग प्रत्यारोपण पनि । जसलाई विज्ञानको चमत्कार भनेर प्रचार गरिए पनि यो वैदिक सनातनीहरुको उपहार हो । किनभने वेदले भविष्यवाणी नै गरेको थियो– संसारमा जे छ त्यो वेदमा उल्लेख छ र वेदमा नभएको संसारमा केही पनि छैन भन्ने दृढ विश्वास छ ।
दक्षप्रजातिको मात्र हैन महादेवले नै गणेशको शिरोच्छेदन गरेपछि हात्तीको टाउको जोडिदिएका थिए । आफ्नी पत्नी पार्वतीले ‘बुकुवा’ दल्दा निस्केको मयलको डल्लोबाट मानव आकार दिइन र यसमा शक्ति दिएर द्वारपाले राखिन । महादेव आउँदा उसले द्वार खोलेन । शिरले चुर महादेवले गणेशको शिर छिनाइदिए । पछि पार्वतीको अनुनयपछि हात्तीको टाउको जोडिदिएर जीवन दिएका थिए । गणेशको सन्दर्भ अमैथुनी सृष्टिसंगै अंग प्रत्यारोपणसंग सम्बन्ध राख्दछ ।
यो केवल कथा मात्र नभएर आजको घटनाक्रम र विकासलाई हेर्ने हो भने मानव जीवनका लागि आवश्यक पक्ष र अनुसन्धानको विषय थियो । असम्भव भन्ने केही छैन भन्ने वैदिक शास्त्रको मान्यता र यही मान्यताले आज संसार चलिरहेको छ । वेद वा शास्त्रहरु फगत धर्म सिकाउने र मानिसलाई अफिम पिलाएर लट्ठयाए जस्तो पार्ने हैन । यो ज्ञान–विज्ञान र विश्व ब्रह्माण्डको जानकारी दिने अद्भूत ज्ञानको भण्डार हो । तर यसलाई मास्ने अनेक प्रपञ्च चलिरहेको छ । वेद अर्थात् ज्ञानलाई धर्मग्रन्थको रुपमा परिवर्तन गरेर यसलाई दुत्कार्ने पश्चिमा षड्यन्त्रको शिकार बनेका हामी नेपालीहरुले आफ्नोपनको आत्मसात गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।
माथी उल्लेख गरिएका केही सन्दर्भ केही दशकअघिसम्म केवल जनता भुलाउने रमाइलो कथा लाग्नसक्थ्यो तर अहिले आधुनिक विज्ञानले नै हाम्रा शास्त्रमा भएका सबै कुरा प्रयोगमा ल्याइसक्यो भने हामी कति अग्रगामी थियौं भन्ने मननीय पक्ष छ । अरुले घोकाइदिएको पाठ पढेर यथार्थता नबुझी उफ्रनु आत्मघात मात्र हो ।
खासमा वैदिक शास्त्रहरुमा चिकित्सा विज्ञानदेखि अर्थशास्त्र, मानव मनदेखि हिंसा र समाज खलबलिनुको कारणहरुमा गहन विश्लेषण गरेको छ । वेदले प्रदूषित मन समग्र विश्वको अशान्तिको कारण मानेको छ । मनबाट निस्कने प्रदूषण क्रमशः परिबारे, समाज र राष्ट्र हुँदै समस्त विश्वमा फैलन सक्दछ । वेदमा अनेक प्रसङ्गमा मन प्रदूषण भएर उत्पन्न हुने मानसिक तनावको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समन गर्न अथवा घटाउने र दूर गर्ने उपायहरूको विवरण दिइएको छ । मानसिक तनावको अन्तिम परिणाम हिंसा हो र यो आत्महत्यामा परिणत हुन्छ भनेको छ । यो तथ्यलाई पाश्चात्य संसारका विद्वानहरूले धेरै पछि आएर अध्ययन, मनन् र निष्कर्ष दिएका हुन् ।
भूतदेखि भविष्यसम्म सबै कुराको बेलिविस्तार लगाउने वैदिक सनातन धर्मशास्त्र आजभोलि विस्मृतिमा परेको छ । आधुनिक कालखण्डका मनोविज्ञ, मनोपरामर्शदाताहरुले दिने सल्लाह सुझावभन्दा हजारौं गुणा उत्तम सुझाव र ज्ञान शास्त्रहरुमा अर्थात् वेदमा दिइएको छ । मानव शरीर र मनको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ । ज्ञान, विज्ञान, आविष्कारका चर्चा छन् । राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति, शिक्षा नीति सबैको बेलिविस्तार लगाइएको छ । आजभोलि माक्र्सवादी भन्नेहरुले के बुझेनन् भने महाभारतकालमै कुरुक्षेत्रको लडाई सकिएपछि साम्यवादी शासन सुरु भएको थियो । युधिष्ठिरको शासनकालको एउटै सूत्र थियो “भरिन्छ जतिले पेट उतिमा हो उसको हक धेरै ओगट्ने चोर हो सजायँ गर्नुपर्दछ” आजभोलि समाजवादी अर्थव्यवस्थामा जाने भन्ने नेपालको शासन व्यवस्था र समाज व्यवस्था कस्तो छ ? माक्र्सवादीहरुको सरकार भएको समयमा ?
आफूलाई माक्र्सको अनुयायी भनेर धर्म नमान्ने भन्दै माक्र्सले भनेको ‘धर्म भनेको अफिम हो’ भन्ने एउटा वाक्य जनतालाई घोकाउन चाहन्छन् । तर जतिबेला माक्र्सले त्यो कुरा लेखे त्यतिबेलाको पश्चिमा समाज कस्तो थियो ? चर्चहरुको जगजगीकाबीच उनीहरु धर्मको दुहाई दिएर जनताको शोषण गर्थे । दासप्रथाको त्यो समयमा माक्र्सले जनतालाई धर्मको अफिम दिएर दास बनाइयो भनेका हुन् न कि जहिल्यै धर्म अफिम भने । उनको अर्थशास्त्र आज पनि विश्वमा सर्वाधिक पढिन्छ । नेपालमा पनि माक्र्सको अर्थशास्त्र पढेका छन् भन्नेहरु धेरै छन् र उनीहरु शासन सत्तामा पनि छन् भने माक्र्सको अर्थशास्त्रका सबै पक्ष भुलेर धर्मलाई अफिम भन्दै इसाईकरणको बाटो मात्र किन खोलेको ?
आज पश्चिमा जगत पूर्वीय शास्त्रहरुको अनुशरण गर्न लागिपरेको छ । यो जत्तिको वैज्ञानिक ज्ञानको स्रोत अरु छैन भन्न थालेका छन् । एउटा सन्दर्भ– जर्मन विद्वान मैक्स मूलर संस्कृत भाषाप्रति यति धेरै मुग्ध भए कि उनले आफ्नो नाम नै मैक्स मूलरबाट मोक्ष मूल्लरमा परिवर्तन गरे । उनले हस्ताक्षर गर्ने शैली नै पनि बदले । यिनै मोक्ष मूल्लरले २६ वर्षकै उमेरमा संस्कृत भाषाको ऋग्वेदको प्रथम खण्ड अंग्रेजीमा अनुवाद गरेर प्रकाशित गरे । अनि ऋग्वेदलाई संसारको सवभन्दा प्राचीनतम ग्रन्थ हो भनेर सिद्ध गरे ।
मोक्ष मूल्लर जस्तै संस्कृत भाषाप्रति समान दृष्टि राख्नेहरूको ठूलो संख्या छ । यस्ता विद्वान र विचारकहरूले संस्कृत भाषा र यो भाषामा लेखिएका ग्रन्थहरूको शोध गरेका छन्, अनुवाद गरेका छन् । व्याख्या गरेर लेखेका छन् । प्राचीन ज्ञान विज्ञानको विश्लेषण गरेर संस्कृत भाषा तथा यसभित्रको गुढ रहस्यको मुक्तकण्ठले प्रशंसा नै प्रशंसा गरेका छन् । तैपनि हामी पश्चिमा धर्मरुपान्तरणकर्ताहरुको पछि लागेर आफूलाई भुल्दै गएका छौं ।